Yaa diidan dowladnimo yaase doonayo?
Posted to the Web February 15, 2002
Dhabtii waa labo su'aalood oo maskaxda daalinaayo misana dhabano qabsi-leh inta fajacdayna noqotay cadad aan la koobi-karin , oo Soomaalida wali waxey ka dhursugayaan dowlad dhalato ila haddana lama hayo waxaan ka ahayn dowladaha dhalanteedka ah dadka iyo dalkaba kala qaybiyay . dhabtiina waxaa lagu anfariirsanyahay laguna salalsanyahay sida wadaninimadii loo marin-habaabiyay waana ka yaabantahay oo waa haddii miyir qabtid maskaxdaaduna caafimaad leedahay oo aan lagu sumayn tashwiishyada dano noockastabo ha ahaato, qabiil iyo abtiriskiisa, damac-hunguri, dano-shisheeye, hanqaltaag siyaasadeed, qowleesatinimo iyo falaaganimo bareer ah oo lagu diidanyahay dowladnimo dawigii lagu gaari lahaa.
Dowladnimo yaa diidan? waxaa diidan kuwa Soomaaliya ka dhigay Palmero iyo Bogota oo maalinkastaba ka macaasho dhibka ummadda Soomaaliyeed diidana dowlad dhalato waxayna maciinsadeen qalanqal iyo qalalaaso, kuwa dowladnimo diidan waa kuwa ku caanbaxay inay qafaasheen qarankii dhamaa ku ibtileeyeen burcadnimo, afduub, daroogo, qaad, qandaraas dhismo, adoonsi, been abuur lacageed, qoryo iibis, baryo carbeed, dhac hanti-qarameed, booli-xalaalayse, iyo bareer bara-kicin ah.
Dowladnimo yaase doonayo? waxaa doonayo oo raad-raacayo inta qurbaha ku aguugamay ee garanayo halka xuduntoodii ku aasanthay ee laga soo bara-kiciyay dalkoodi , inta dalka ku qafaalan ee qoriga baas lala hortaaganyahay, dumarka iyo caruurta saboolsan ee mustaqbalkoodi cirka lagu shareeray, waayeelka lagu caasiyay ee waxba laga dhaxlin, ugaarta la didiyay ku dayoowsan dalalka jaarka ah, dhirta si naxariis darrada loo xaalufiyay, badda sumaysan iyo dhulka laga dhigay qanshin-qub meela kale ka yimid.
Danbiilayaasha dhagaraysan ee xad-gudubka ku hayo dadkooda iyo dalkooda waa in la horkeena oo ayna miisaanto gafkooda Carla de ponte oo ciqaabto burcadyada ku xad-gudbo xuquuqda aadamaha inay Soomaalidu farta ku gudaan danbiilayaasha qaran-diidka ah ee burcadnimo maciinsaday.
Waxaa dunida oo dhan waayadan waxey hadal-hayaan in Soomaaliya noqoto karto majliska argagaxisada caalimiga ah ee baadi-goobta, amse dago dalalka dowlaha aan ka jirin sida dalkeena hase ahaate waxaa dunida ka dahsoon burcadnimo 11 jirsatay ee la camal ah argagaxisinima .
waxaan aniga iga yaabiyay markii aan arkay Dkm damaceeda siyaasadeed , doonaysana inay burcad wax la qaybsato. burcadaasna waana kuwa hadd iyo jeerba cadow ku ah ummadda Soomaaliyeed mana doonayaan in xal-waaro laga gaaro qadyada Soomaaliya waxeyna dantoodu tahay fowdo dheeraysi iyo burcadnimo.
Dabcan nasiib xumada Soomaalida waxaa ka mid ah in xitaa waxgaradkii, wadaadkii, cuqaashii, qorayaashii iyo abwaanadii inay iska indha tiraan qaabkay burcadnimada isku habeenow-hilaacsiisay.